‘Mpiara-miasa mba Hahazoantsika Fifaliana’ ny Anti-panahy | Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Ndebele Ndonga Norvezianina Nzema Népali Oromo Ouzbek Pangasinan Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Venda Vietnamianina Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
‘Mpiara-miasa mba hahazoanareo fifaliana izahay.’—2 KOR. 1:24.
Ahoana no nampisehoan’i Paoly fa ‘tsy tompon’ny finoan’ireo rahalahiny’ izy, ary miasa mba ‘hahazoan’izy ireo fifaliana’?
Inona avy no ataon’ny anti-panahy mba hahatonga an’ireo mpiray finoana aminy hahita fifaliana?
Inona no azontsika rehetra atao mba hisian’ny fifaliana eo anivon’ny fiangonana?
1. Inona no vaovao nahafaly an’i Paoly momba an’ireo Kristianina tany Korinto?
TAONA 55 tamin’izay. Ren’ny apostoly Paoly hoe nifanditra ireo rahalahy tany Korinto, ka nalahelo izy. Tia azy ireo toy ny zanany i Paoly, ka nanoratra taratasy mba hanitsiana azy ireo. (1 Kor. 1:11; 4:15) Nirahiny koa i Titosy mba hanampy azy ireo, ary hankany Troasy avy eo mba hanao tatitra taminy. Niandry an’i Titosy tao Troasy àry i Paoly, volana vitsivitsy tatỳ aoriana. Indrisy fa tsy tonga anefa i Titosy! Nandeha sambo nankany Makedonia àry i Paoly, ary faly izy satria nahita an’i Titosy tany. Notantarain’i Titosy taminy fa nankatò ny tenin’i Paoly ireo rahalahy tany Korinto, ary tena naniry hahita azy. “Vao mainka faly” i Paoly rehefa nandre izany.—2 Kor. 2:12, 13; 7:5-9.
2. a) Inona no nosoratan’i Paoly ho an’ny Korintianina momba ny finoana sy ny fifaliana? b) Inona no fanontaniana hodinihintsika?
2 Nanoratra ny taratasiny faharoa ho an’ny Korintianina i Paoly, tsy ela taorian’izay. Hoy izy: ‘Tsy tompon’ny finoanareo izahay fa mpiara-miasa kosa mba hahazoanareo fifaliana, fa ny finoanareo ihany no ijoroanareo.’ (2 Kor. 1:24) Inona no tian’i Paoly holazaina tamin’izany? Ary inona no ianaran’ny anti-panahy ankehitriny avy amin’ireo teny ireo?
NY FINOANTSIKA SY NY FIFALIANTSIKA
3. a) Inona no tian’i Paoly holazaina tamin’ilay hoe: “Ny finoanareo ihany no ijoroanareo”? b) Ahoana no hanahafan’ny anti-panahy ankehitriny an’i Paoly?
3 Noresahin’i Paoly ny toetra roa tena ilaina eo amin’ny fanompoana an’i Jehovah: Ny finoana sy ny fifaliana. Hoy izy momba ny finoana: “Tsy tompon’ny finoanareo anefa izahay ... fa ny finoanareo ihany no ijoroanareo.” Hita avy amin’ireo teny ireo fa niaiky i Paoly hoe tsy nivadika ireo rahalahy tany Korinto. Tsy noho ny nataon’i Paoly akory, na noho ny nataon’olon-kafa, fa noho ny finoan’izy ireo an’Andriamanitra. Tsy nibaikobaiko ny hafa àry i Paoly ny amin’izay fomba anehoany ny finoany, sady tsy naniry hanao izany koa. Natoky kosa izy fa tsy nivadika izy ireo, ary naniry hanao ny tsara. (2 Kor. 2:3) Manahaka an’i Paoly koa ny anti-panahy ankehitriny, ka matoky fa manam-pinoana ireo mpiray finoana aminy ary antony tsara no anompoan’izy ireo an’i Jehovah. (2 Tes. 3:4) Tsy mametraka fitsipika hentitra ho an’ny fiangonana izy ireo, fa mampiasa ny toro lalan’ny Soratra Masina sy ny tari-dalan’ny fandaminan’i Jehovah, mba hanampiana ny ondry. Tsy tompon’ny finoan’ny rahalahiny mantsy ny anti-panahy.—1 Pet. 5:2, 3.
4. a) Inona no tian’i Paoly holazaina tamin’ilay hoe: ‘Mpiara-miasa mba hahazoanareo fifaliana izahay’? b) Ahoana no hanahafan’ny anti-panahy ankehitriny an’i Paoly?
4 Hoy koa i Paoly: ‘Mpiara-miasa mba hahazoanareo fifaliana izahay.’ Niresaka momba azy sy ireo olona niara-niasa taminy i Paoly teo. Iza ireo niara-niasa tamin’i Paoly ireo? Tsy iza fa ireo olona niasa mafy niaraka taminy, mba hanampiana an’ireo Korintianina. Nahoana isika no milaza izany? Satria nilaza momba ny olona roa nanampy azy izy, ao amin’io taratasy nosoratany io. Hoy izy: ‘Nitory momba an’i Jesosy teo aminareo izahay sy Silvano ary Timoty.’ (2 Kor. 1:19) Ankoatra izany, rehefa nilaza i Paoly ao amin’ny taratasy nosoratany hoe “mpiara-miasa”, dia ireo olona niasa mafy niaraka taminy foana no resahiny, anisan’izany, ohatra, i Apolosy, Akoila, Priska, Timoty, Titosy. (Rom. 16:3, 21; 1 Kor. 3:6-9; 2 Kor. 8:23) Rehefa nilaza tamin’ireo Korintianina àry i Paoly hoe ‘mpiara-miasa mba hahazoanareo fifaliana izahay’, dia te hilaza izy fa miara-miasa izy sy ny namany, ka manao izay rehetra azony atao, mba hahatonga ny fiangonana hahita fifaliana. Izany koa no tanjon’ny anti-panahy ankehitriny. Maniry hanao izay rehetra azony atao izy ireo mba hanampiana ny rahalahiny ‘hanompo an’i Jehovah amim-pifaliana.’—Sal. 100:2; Fil. 1:25.
5. Inona no fanontaniana napetraka tamin’ny rahalahy sy anabavy sasany, ary inona no tokony hoeritreretintsika?
5 Nisy rahalahy sy anabavy be zotom-po avy any amin’ny tany samihafa, nanontaniana toy izao vao haingana: “Inona no teny sy zavatra nataon’ny anti-panahy, ka nahatonga anao ho faly kokoa?” Ho hitantsika ato ny valin-tenin’izy ireo, ary eo am-pandinihana izany, dia eritrereto hoe inona no teny sy zavatra nataon’ny anti-panahy ka nahatonga anao ho faly kokoa. Eritrereto koa hoe inona no azonao atao mba hisian’ny fifaliana eo anivon’ny fiangonana misy anao. *
“MAMPAMANGY ANY AMIN’I PERSY ANABAVY MALALANTSIKA”
6, 7. a) Inona no fomba iray anahafan’ny anti-panahy an’i Jesosy sy Paoly ary ny mpanompon’i Jehovah hafa? b) Nahoana no faly ireo rahalahy sy anabavy rehefa tadidintsika ny anarany?
6 Maro amin’ireo rahalahy sy anabavintsika no nilaza fa faly kokoa izy ireo, rehefa maneho fiahiana azy manokana ny anti-panahy. Fomba iray anaovan’ny anti-panahy izany ny fanarahana ny ohatr’i Davida sy Eliho ary Jesosy. (Vakio ny 2 Samoela 9:6; Joba 33:1; Lioka 19:5.) Niantso olona tamin’ny anarany i Davida sy Eliho ary Jesosy, mba hampisehoany fa tena niahy azy ireo izy. Fantatr’i Paoly koa fa zava-dehibe ny mitadidy ny anaran’ny mpiara-manompo aminy ary miantso azy amin’ny anarany. Nanonona anarana mpiara-manompo maherin’ny 25 izy, rehefa namarana ny taratasiny iray, ka anisan’izany i Persy. Hoy i Paoly momba azy: “Mampamangy any amin’i Persy anabavy malalantsika.”—Rom. 16:3-15.
7 Tena sarotra amin’ny anti-panahy sasany ny mitadidy anarana. Raha miezaka anefa izy ireo mba hanao izany, dia toy ny milaza amin’ny mpiara-manompo aminy hoe: ‘Sarobidy amiko ianao.’ (Eks. 33:17) Faly koa ireo rahalahy sy anabavy, rehefa miantso azy amin’ny anarany ny anti-panahy, mandritra ny Fianarana Ny Tilikambo Fiambenana na fivoriana hafa.—Ampitahao amin’ny Jaona 10:3.
“NANAO ASA MAFY MARO TAO AMIN’NY TOMPO IZY”
8. Ahoana no nanahafan’i Paoly an’i Jehovah sy Jesosy?
8 Faly koa ny mpiara-manompo rehefa mahazo teny fiderana amim-pahatsorana. Io no fomba iray nataon’i Paoly, mba hampisehoana fa niahy ny mpiray finoana taminy izy. Hoy izy tao amin’ilay taratasy nosoratany ho an’ny Korintianina: “Lehibe ny reharehako ny aminareo.” (2 Kor. 7:4) Azo antoka fa nampifaly ny fon’ireo Kristianina tany Korinto ireo teny ireo. Nanao teny fiderana ho an’ny fiangonana hafa koa i Paoly. (Rom. 1:8; Fil. 1:3-5; 1 Tes. 1:8) Nidera an’i Persy koa izy, rehefa nanoratra taratasy ho an’ny fiangonana tao Roma. Hoy izy: “Nanao asa mafy maro tao amin’ny Tompo izy.” (Rom. 16:12) Azo antoka fa nampahery an’io anabavy tsy nivadika io izany! Nanahaka an’i Jehovah sy Jesosy i Paoly, rehefa nanao teny fiderana toy izany.—Vakio ny Marka 1:9-11; Jaona 1:47; Apok. 2:2, 13, 19.
9. Nahoana ny fiangonana no faly kokoa, rehefa mifanao teny fiderana ny rehetra?
9 Fantatry ny anti-panahy ankehitriny koa fa tena ilaina ny milaza teny fankasitrahana amin’ireo mpiray finoana. (Ohab. 3:27; 15:23) Isaky ny manao izany ny anti-panahy, dia toy ny milaza amin’ny rahalahiny hoe: ‘Voamariko izay nataonao, ary tena miahy anao aho.’ Tena mila mandre teny mampahery avy amin’ny anti-panahy ireo mpiray finoana amintsika. Hoy, ohatra, ny anabavy iray 55 taona eo ho eo: “Tsy dia mahazo teny fiderana aho any am-piasana. Tia mifaninana ny olona ary tsy miraharaha ny hafa, ka tena mahazo fampaherezana aho rehefa midera ahy ny anti-panahy, noho ny zavatra nataoko ho an’ny fiangonana. Tsapako avy amin’izany fa tia ahy ilay Raiko any an-danitra.” Nahatsapa toy izany koa ny rahalahy iray manan-janaka mianadahy izay mitaiza irery ny zanany. Nidera azy tamin’ny fony ny anti-panahy iray, ka hoy izy: “Tena nanome hery ahy ny tenin’ilay anti-panahy!” Mampahery tokoa ny teny fiderana avy amin’ny fo omen’ny anti-panahy. Mahatonga ny mpiray finoana ho faly koa izany, ka manampy azy ireo handeha foana amin’ny lalan’ny fiainana ary “tsy ho reraka.”—Isaia 40:31.
‘ANDRASO NY FIANGONAN’ANDRIAMANITRA’
10, 11. a) Ahoana no hanahafan’ny anti-panahy an’i Nehemia? b) Inona no hanampy ny anti-panahy “hampita fanomezana ara-panahy”, rehefa manao fitsidihan’ny mpiandry?
10 Misy fomba lehibe hafa koa ampisehoan’ny anti-panahy hoe miahy ny mpiray finoana aminy izy, ary te hanampy azy ireo ho faly manompo an’i Jehovah. Tsy inona izany fa ny fanampiana an’ireo mila fampaherezana. (Vakio ny Asan’ny Apostoly 20:28.) Manahaka an’ireo mpiandry voatendrin’i Jehovah fahiny ny anti-panahy rehefa manao izany. Mariho, ohatra, izay nataon’i Nehemia rehefa hitany fa kivy ny sasany tamin’ireo Jiosy namany. Milaza ny Baiboly fa nitsangana avy hatrany izy ary nampahery azy ireo. (Neh. 4:14) Tokony hanao toy izany koa ny anti-panahy ankehitriny. Tokony hanao zavatra avy hatrany izy ireo mba hanampiana ny mpiray finoana aminy hanana finoana matanjaka. Mba hanaovana izany, dia mila mitsidika an’ireo rahalahy sy anabavy any an-tranony izy ireo, raha mety ny toe-javatra. ‘Mampita fanomezana ara-panahy’ izy ireo mandritra izany fitsidihana izany. (Rom. 1:11) Inona àry no hanampy ny anti-panahy mba hanao tsara ny fitsidihan’ny mpiandry?
11 Mila maka fotoana ieritreretana an’ilay olona ny anti-panahy, alohan’ny hitsidihana azy. Mila mandinika izy hoe: ‘Inona no olana atrehin’ilay olona? Inona no hevitra mety hampahery azy? Inona no andinin-teny na ohatra ao amin’ny Baiboly, mifandray amin’ny toe-javatra misy azy?’ Ho afaka hiresaka zavatra mahasoa ny anti-panahy, rehefa mandinika mialoha toy izany, fa tsy hanao resaka tsy misy dikany. Tokony havelan’ny anti-panahy hiresaka tsara koa ireo rahalahy sy anabavy, mandritra ilay fitsidihana, ary tokony hihaino tsara izy. (Jak. 1:19) Hoy ny anabavy iray: “Tena mahazo fampaherezana aho rehefa mihaino ahy tsara ny anti-panahy.”—Lioka 8:18.
Mila manomana ny anti-panahy alohan’ny hanaovana fitsidihan’ny mpiandry, mba hahafahany hizara “fanomezana ara-panahy”
12. Iza no mila fampaherezana eo anivon’ny fiangonana, ary nahoana?
12 Iza no mila ny fampaherezan’ny anti-panahy? Nilaza tamin’ireo anti-panahy i Paoly hoe ‘tandremo ny ondry rehetra.’ Ny rehetra eo anivon’ny fiangonana àry no mila fampaherezana, anisan’izany ireo mpitory sy mpisava lalana tsy mivadika, izay nanompo nandritra ny taona maro. Nahoana izy ireo no mila ny fanampian’ny anti-panahy? Marina fa matanjaka ara-panahy izy ireo, kanefa tena sarotra be amin’izy ireo indraindray ny miatrika an’ireo olana aterak’ity tontolo ratsy ity. Andeha hojerentsika izay nitranga tamin’i Davida Mpanjaka, mba hahitantsika fa mila ampaherezina koa, na dia ny Kristianina matanjaka ara-panahy aza.
‘TONGA NANAMPY AN’I DAVIDA I ABISAY’
13. a) Oviana i Jisbi-benoba no nanararaotra namely an’i Davida? b) Ahoana no nahafahan’i Abisay nanampy an’i Davida?
13 Nifanandrina tamin’i Goliata i Davida, tamin’ izy mbola tanora, tatỳ aorian’ny nanosorana azy ho mpanjaka. Anisan’ny taranaky ny Refaima, olona goavam-be, i Goliata, nefa resin’i Davida izay be herim-po tokoa. (1 Sam. 17:4, 48-51; 1 Tan. 20:5, 8) Niady tamin’ny Israelita indray ny Filistinina tatỳ aoriana, ary nisy olona goavam-be indray nifanandrina tamin’i Davida. Tsy iza izany fa i Jisbi-benoba, izay taranaky ny Refaima koa. (2 Sam. 21:16) Saika maty anefa i Davida tamin’izay. Nahoana? Tsy hoe satria tsy be herim-po intsony izy, fa satria nihena ny heriny. Hoy ny Baiboly: “Reraka i Davida.” Raha vao hitan’i Jisbi-benoba izany, dia “saika hamely” an’i Davida izy. Raha vao nanainga ny fiadiany anefa izy, dia ‘tonga avy hatrany i Abisay zanak’i Zeroia, mba hanampy an’i Davida. Namely an’ilay Filistinina i Abisay, ary namono azy ho faty.’ (2 Sam. 21:15-17) Tena saika maty i Davida! Azo antoka fa nankasitraka an’i Abisay izy, satria nanara-maso an’izay zava-nitranga taminy i Abisay, ary nanampy azy haingana rehefa nisy loza. Inona no ianarantsika avy amin’io tantara io?
14. a) Inona no manampy antsika hanompo an’i Jehovah foana, rehefa misy olana goavam-be? b) Ahoana no hanampian’ny anti-panahy ny hafa mba ho faly sy hahazo hery indray? Manomeza ohatra.
14 Manompo an’i Jehovah foana isika Vavolombelon’i Jehovah maneran-tany, na dia asian’i Satana sy ny olony sakantsakana aza ny lalantsika. Nahavita nandresy olana goavam-be toa an’i Goliata ny sasany tamintsika, satria niantehitra tanteraka tamin’i Jehovah. Reraka anefa isika indraindray ary kivy, rehefa mitohy foana ny fanafihan’ity tontolo ity. Mahatsiaro ho tsy ampy hery isika amin’ireny fotoana ireny, na dia tokony ho vitantsika aza ny miatrika an’ilay olana. Faly sy mahazo hery indray anefa isika raha misy anti-panahy manampy antsika, amin’izay fotoana izay. Maro no nahatsapa izany. Hoy ny anabavy mpisava lalana iray, 65 taona eo ho eo: “Nisy fotoana aho tsy dia salama, ka nandreraka ahy ny nandeha nanompo. Voamariky ny anti-panahy iray izany, ka nanatona ahy izy. Niara-nidinika andinin-teny iray izahay, ary tena nampahery ilay izy. Nampihariko ny soso-kevitra nomeny ahy, ka nandray soa aho.” Hoy koa izy: “Tena be fitiavana tokoa ilay anti-panahy satria nahamarika ny olana nahazo ahy ka nanampy ahy!” Mampahery tokoa ny mahalala fa manara-maso antsika amim-pitiavana ny anti-panahy, ary vonon-kanampy toa an’i Abisay.
‘FANTARO NY FITIAVAKO ANAREO’
15, 16. a) Nahoana no tena tia an’i Paoly ny mpiray finoana taminy? b) Nahoana isika no tia an’ireo anti-panahy?
15 Miasa mafy ny anti-panahy. Tsy matory izy ireo indraindray fa mivavaka ho an’ny andian’ondry na manome fanampiana ho azy ireo. (2 Kor. 11:27, 28) Faly anefa izy ireo manatanteraka tsara ny andraikiny, toy ny nataon’i Paoly. Hoy izy tamin’ireo Korintianina: “Ho faly tokoa aho hanome izay rehetra ananako sy hanao sorona tanteraka ny fiainako ho anareo.” (2 Kor. 12:15) Tian’i Paoly ireo mpiray finoana taminy, ka nandany ny heriny izy mba hampaherezana azy ireo. (Vakio ny 2 Korintianina 2:4; Fil. 2:17; 1 Tes. 2:8) Tsy mahagaga àry raha tena tia an’i Paoly ireo mpiray finoana taminy ireo!—Asa. 20:31-38.
16 Tiantsika koa ireo anti-panahy, ary misaotra an’i Jehovah amin’ny vavaka isika noho izy mampiasa azy ireny mba hikarakara antsika. Faly kokoa isika rehefa miahy manokana antsika ny anti-panahy. Mampahery antsika ny fitsidihana ataony. Velom-pankasitrahana isika satria vonon-kanampy antsika izy ireny, rehefa tototry ny olana aterak’ity tontolo ity isika. ‘Mpiara-miasa mba hahazoantsika fifaliana’ tokoa ny anti-panahy!
^ feh. 5 Nanontaniana koa ireo rahalahy sy anabavy ireo hoe: “Inona no toetra tena tianao amin’ny anti-panahy?” Namaly ny ankamaroany hoe: “Mora hatonina.” Hodinihina amin’ny lahatsoratra ho avy ny momba an’io toetra lehibe io.